Inhlanzi eqandisiwe: amaqiniso athile intresno
Ngokuvamile ungabona izinhlanzi eqandisiwe izitolo zokuthenga. Uma kungokwalabo Sturgeon noma salmon zilwane, ke kubuyise ucezu. Phakathi nabancane izinhlanzi afakwe indlela eyisipesheli 12 kg. Uma sikhuluma Baltic herring, sprat futhi anchovy ke asetshenziselwa zokuthutha yayo futhi isitoreji briquettes kokuba isisindo engaphansi kilogram.
Uma simisiwe izinga inhlanzi, it ine ukubukeka ekhangayo futhi ukunambitheka omuhle. Isidumbu sakhe okumelwe wenziwe phakathi nesikhathi futhi akashintshi ezakheke ngemva incibilikiswa, esiswini akuyona evuvukele. It libhekene gills abomvu, convex, namehlo ukukhanya (uma isidumbu ngokwahlukana). Ngaphezu kwalokho, ukudla lapho ibekwe emanzini ngokushesha eshona.
Indlela ukukhetha izinhlanzi kwesokudla?
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi phakathi nombono wokuthi "eqandisiwe" futhi "eqandisiwe" inhlanzi kunomehluko. Ngakho ngokuthi eqandisiwe inhlanzi, okuyinto is phansi lokushisa ongaphakeme noma ifomu ephilayo, noma ngokushesha ngemuva evisceration futhi ikhanda uhlukanisa. Kulokhu, isicelo amafriji ekhethekile.
Kumele kukhunjulwe ukuthi inhlanzi ezinjalo kungagcineki izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 ezingeni lokushisa 0 ° C noma kufikela kuzinsuku ezingu-15 ngesikhathi -5 ° C. Uma esitolo ukuthi udayisa imikhiqizo efanayo, akukho okuhambisanayo Igumbi ifriji, wonke umkhiqizo kumelwe lithengiswe zingakapheli izinsuku.
inhlanzi eqandisiwe selehlile ezingeni lokushisa ongaphakeme okungase 18 ° C. Uma le umswakama emisipheni isidumbu, yiqhwa. Lapho incibilikiswa izinhlanzi enjalo ingase ithambe kakhulu futhi lwamanzi. Ngaphezu kwalokho, layo umsoco kuyehla uma ziqhathaniswa ukudla.
Kufanele kushiwo ukuthi okwesikhathi isitoreji kangcono izinhlanzi uzisibekele glaze ice. It yakhelwe ukuvikela iphele ukuphuma, kufanele kube sobala futhi mncane. Uma uqaphela ungqimba obukhulu ice, enye inyoni ezimhlophe ngokwayo, kungcono ukuba ayiyeke le ukuthenga, ngoba iningi imali ukhokhela amanzi, kodwa hhayi ngoba inhlanzi inyama.
Kuze kube manje, okungcono isigamu-siphelile umucu kubhekwa, esibonakala by isidingo esikhulu phakathi abathengi, njengoba ingasetshenziswa ngaphandle pretreatment.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kungase izinhlanzi eqandisiwe inikelwe ngesimo inyama. Iza izinhlobo ezimbili. Class yenziwa kuphela fillet, wesibili siqukethe phansi kanye amathambo nezidumbu isikhumba. Mangisho ukuthi ukugxusha Yenziwe ezihlukahlukene zezinhlanzi kanye simisiwe ngqo ezitsheni ezingeni lokushisa hhayi ngaphansi kuka -30 ° C.
Ngo ukupheka, zikhona izindlela eziningi ukulungiswa ezihlukahlukene izinhlanzi izitsha. Eliphezulu simisiwe izinhlanzi by ukunambitheka kwabo izakhiwo cishe kwafana fresh, kodwa kuyadingeka ukwazi indlela ukupheka. Into ebalulekile okumele kukhunjulwe, kuba incibilikiswa.
Kumele kukhunjulwe ukuthi inhlanzi eqandisiwe abakwazi ukubekezelela amanzi afudumele, ngenxa kuba flabby futhi kunganambitheki. Uma uhlela ukuba ukupheka fillet, kuyinto efiselekayo iqhwa elisenyameni emoyeni, okuyinto kuvimbela ukulahlekelwa okukhulu kwezakhi namavithamini.
Indlela ukubhaka Muffin ku-microwave?
Ezithakazelisa kakhulu zomlando
Parsley ubusika: izindlela preform
Umbiko kwi ekukhishweni yesivumelwano ikhasimende
Kanjani ukuyeka ukubhema izinsuku 2? Ukubhema Kalula!